Studio Ghibli dia namoaka sary 400 an'ny horonantsary malaza indrindra | Famoronana an-tserasera
Tsy misy fomba tsara kokoa hanomezana fampahalalana tsara indrindra amin'ny zavatra noforoninao noho ny fanoloranao ireo sary ireo amin'ny vahaolana avo lenta hahafahan'ny mpanaraka anao mampiasa azy ireo. Izany ve no nataony Studio Ghibli andro lasa izay raha sary 400 an'ny 8 no napetraka an-tserasera ny sarimihetsika sarimihetsika.
Ary eo am-piandrasana ny voalohany Sarimihetsika Ghibli amin'ny endrika nomerika, izay amin'ny 3D, ary izany dia hataon'ny zanakalahin'i Miyazaki mazava tsara, ankehitriny azontsika an-tànana izay atiny ahafahantsika manova ny sary an-tsoratry ny findaintsika na ny solosaina findainy tsotra fotsiny.
Ary raha androany dia azontsika atao ny ampidino ireo sary 400 izay namboarin'i Studio Ghibli amin'ny sarimihetsika 8 nataony, toa hanitatra ny isan'izy ireo izy. Izany hoe, na dia tsy manana safidy hampidina rindrambaiko Princess Mononoke aza izahay dia mety hanana izany tsy ho ela, koa tandremo ny rohy izay homenay anao.
Ireo sary azonao sintonina avy amin'ity rohy ity izy ireo nandefa ny hafatra avy amin'ny mpamokatra Toshio Suzuki ao amin'ny Ghibli: "Azafady ampiasao maimaimpoana izy ireo amin'ny saina tsy miangatra." Izany hoe afaka mampiasa azy ireo isika fa tsy mahazo tombony na ahazoana tombony amin'izany, koa miambena hatrany.
Hay amin'izao fotoana izao dia sary 50 an'ny tsirairay amin'ireo sarimihetsika 8: 'Memory an'i Marnie', 'Ponyo', 'Karigushai no Arriety', 'The Tale of Princess Kaguya', 'Poppy Hill', 'The Wind Rises', 'Tales from Earthsea' ary 'The Spirited Away'.
Fotoana tsara ahazoana mihazona Sarimihetsika manokana avy amin'ireo sarimihetsika Studio Ghibli ary dia miandry ny sarimihetsika vaovao izahay Aya sy ilay mpamosavy ary avy aiza no antenaina ny zava-drehetra; miandry ihany koa ny fomba hahafahan'izy ireo mampiasa 3D hanohizany manolotra majia sy tantara tsy misy toa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Studio Ghibli dia mametraka sary 400 an'ny 8 amin'ny horonantsarin'izy ireo